Zox Again | ဘ၀ခရီးသွားတစ်ဦး | Page 2
YouTube နဲ့ Web ပေါ်က Video clips တွေကို ဒေါင်းဖို့
September 30, 2011 by zoxagain
တနေ့ကပဲ အင်တာနက် သုံးရင်း နှစ်ပေါင်းများစွား ဘန်းခံထားရတဲ့ YouTube ကို ၀မ်းသာအားရ ဖွင့်သုံးနေမိရာက IDM နဲ့ လတ်တလော ဒေါင်းမရတဲ့ YouTube ကလစ်ပ်တွေကို Down လို့ ရမယ့် Downloader ကို ရှာဖွေမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ညီငယ် တစ်ယောက်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ Maxthon Browser ကို တွေ့ရှိမိပါတယ်။ ကြည့်လို့ရတဲ့ ဘယ်လို ဗွီဒီယို ကလစ်ကို မဆို Maxthon Browser နဲ့ ဖွင့်သုံးမယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူ ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ အတော်သုံးလို့ ကောင်းတဲ့ Browser ဖြစ်သလို သုံးရတဲ့နေရာမှာလည်း အတော်လေးကို လွယ်ကူမှုရှိပါတယ်။ စိတ်ကြိုက် Video Clip တွေကို ဒေါင်းဖို့ ဆန္ဒရှိနေတဲ့ နေ့မှာ Mozilla Firefox အစား၊ Maxthon ကို သုံးပြီး စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေတာကို တွေ့ရပါမယ်။
လင့်က်အတိုင်း ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး သုံးစွဲကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။
Posted in Read it.	Tagged way for using internet
Dubai Visit Visa Applying Service
September 3, 2011 by zoxagain
Dubai (U.A.E) Visit Visa နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရရှိနိုင်ဖို့ အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို အခက်အခဲ ရှိကြပါတယ်။ အကယ်၍များ အဲ့ဒီလို အခက်အခဲလည်းရှိ၊ ဒူဘိုင်းကိုလည်း အလည်အနေနဲ့သွားချင်တယ်ဆိုရင် ယူအေအီး အလည်ဗီဇာကို အခက်အခဲမရှိ တစ်ပတ်အတွင်း ၀န်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ သူများ ဆက်သွယ်ကြပါရန် ဒူဘိုင်းအကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted in Read it.
May 13, 2011 by zoxagain
ကျနော့်မှာ ခိုလှုံစရာ ဆိုတာက မေမေပဲ ရှိခဲ့ဖူးတာကိုး… ဘ၀မှာ….
ကျနော် အမှား လုပ်မိတဲ့အခါ
ကျနော့်ကို အဖေရိုက်တဲ့ အခါ…
အမေ့ ထမိန်စကို ဆွဲထားတဲ့ သားကို…
ဟိုးတခါ… စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ…. အမေ့ကို ဆွဲသွားကတုန်းလိုမျိုး….
အမေ့ ထမိန်စကို အမေ ဆောင့် မဆွဲသွားဘူး….
အဖေ့ တုတ်ချက်တွေကို ဘယ်လောက်ကြောက်တယ်ဆိုတာ အမေသိတယ်…
ကျနော် မှားပါတယ် မေမေ…
ခုတော့ ကျနော့် အမှားတွေအတွက်
လောကကြီးကပဲ ကျနော့်ကို ရိုက်မှာပါ မေမေ…
ဆွဲစရာ မေမေ့ ထမိန်စလည်း အနားမှာ မရှိ…
ပြေးစရာလည်း မြေက မရှိ…
ကျနော် အရိုက်ခံရတော့မယ်… မေမေ…
ရင်ထဲမှာ နင့်လွန်းလို့ ကိုအောင်သာငယ် ဆီက ခွင့်တောင်းပြီး နှလုံးသားချင်း တူနိုင်သူများအတွက် ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted in Poem of my life.
အချစ်ကို ညီမျှသော Hotel Life
April 20, 2011 by zoxagain
ကျွန်တော်ရဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးက ပို့စ်အဟောင်းလေးကို ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းတဲ့ သဘောနဲ့ ပြန်တင်လိုက်တာပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် တန်ဖိုးထားတဲ့ အချစ် နဲ့ ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ Hotel Life ရဲ့ ဆက်နွယ်မှုလေးကို ဖော်ထုတ် တင်ပြထားပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဆက်လက် ဖတ်ရှုပေးပါ……
လူသည် ဘ၀၏ ၀န်ထမ်းဖြစ် ပါ၏။ ထို့အတွက်ကြောင့် အချစ်သည်လည်း Marketting Assistant ဖြစ်ပါ၏။ မိမိနှလုံးသားနှင့် ကိုက်ညီမည့် စားသုံးသူအား ရှာဖွေရပါ၏။ စိတ်ကျေနပ်စေရန် ၀န်ဆောင်မှု ပေးရပါ၏။ ဤသို့ဖြင့်ပင် ဘ၀၏ ပါတနာကို ရှာဖွေပေးရပါလေ၏။
တဖန် အချစ်သည် Chief Cook ဖြစ်ပေးရပြန်၏။ ရရှိထားသော ပါတနာအား ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု မရှိစေရန် Kitchen အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ရ၏။ ဟင်းလျာများကို စီမံခန့်ခွဲရ၏။ လှီးဖြတ်ရ၏။ ချက်ပြုတ်ရ၏။ ကံအားလျှော်စွာ ဈေးသို့သွားရ၏။ ဟင်းလျာများကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် ဖြစ်ပါ၏။
အချစ်သည် Steward ဖြစ်ပြန်လေ၏။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ရေစိုများသော လက်သည် ပဲကြီးခွံ ထတတ်၏။ ရေ၀ဲစားတတ်၏။ အချစ်သည် ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းအား အားပေးခြင်း မရှိ။ မိမိနှလုံးသား နှင့် ကိုက်ညီပေးသူ (စားသုံးသူ) အား ထိုသို့သော အဖြစ်မျိုးမှ လွတ်မြောက်စေ၏။ အချစ်သည် တခါတရံလည်း ပန်းကန်ဆေးရလေ၏။ ထို့အတွက် ကြောင့်ပင် အချစ်တွင် ပဲကြီးခွံ ထလာလေ၏။
Laundry Stuff တွင် အချစ်လည်း ပါဝင်ပါ၏။ ဘ၀၏ အညစ်အကြေး များနှင့် အတူ စားသုံးသူ၏ အ၀တ်များကို ရောနှော လျှော်ဖွပ်ရ၏။ ပဲကြီးခွံ များကို ဆက်လက် မွေးမြူရ၏။ ရေဆွဲရ၏။ အ၀တ်လှန်း ရ၏။ ထိုသို့ဖြင့်ပင် ဖွေးဖြူသော အချစ်များကို ဆက်လက် တိုးပွားစေ လေ၏။
Housekeeping အလုပ်များ နှင့်လည်း အချစ်သည် ကျွမ်းဝင် ရပြန်၏။ ကြမ်းပြင်၏ ဖုန်များအား နှလုံးသားတွင် တင်နေသည့် အလား သုတ်ခါရ၏။ အိပ်မက် များ၏ လမ်းတစ်ခု (သို့) အိပ်ယာခင်း တစ်ခုတည်းအား ကျနစွာ ခင်းပေးရ၏။ ခေါင်းအုံး၊ ခြင်ထောင်၊ စောင် စီစဉ် ပေးရ၏။ နောက်တစ်နေ့ အတွက် ခရီးဆက်ကြရလေ၏။
လူသည် ဘ၀၏ ၀န်ထမ်းဖြစ်ပါ၏။ ထို့အတွက်ကြောင့် အချစ်သည် နောက်ဆုံးတွင် Receptionist ဖြစ်ရလေတော့၏။ တိုးပွားလာမည့် တဆင့်ခံ စားသုံးသူများ အား ကြိုဆိုရလေ၏။ ရှာဖွေ ရရှိလာသော ၀င်ငွေများအား စုဆောင်း၊ ထိန်းသိမ်း၊ ကြပ်မတ် ရလေ၏။ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင် အချစ်သည် အချစ်မှ အပ လိုလားချက် ကင်းလေရာ အရာ အားလုံးအား အချစ်လက်သို့ (၀ါ) ပါတနာအရင်း ခေါက်ခေါက် လက်သို့ပင် ပေးအပ်လိုက် ရလေတော့၏။
သို့ဖြစ်ရာ အချစ်နှင့် Hotel Life သည် ဆက်နွယ်လျှက် ရှိနေတော့ လေသတည်း။
WordPressing နှင့် Blogspotting
April 11, 2011 by zoxagain
ကျွန်တော် ထင်သလောက် မြန်မာပြည်မှာ WordPress သုံးစွဲသူဦးရေ နဲ့ Blogspot သုံးစွဲသူဦးရေမှာ Blogspot သုံးစွဲသူ Blogger အရေအတွက်က ပိုများမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Blogging လောကကိုလည်း Blogspot ကနေပဲ အစပြုပြီး ရောက်လာကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ WordPress ထက် အရင်ပေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်သလို၊ သုံးစွဲရတဲ့ နေရာမှာလည်း လွယ်ကူတဲ့အတွက် စားသုံးသူ တော်တော်များများကို ညှို့ငင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ Blogspot ကို ဘန်းထားတာတောင် ဇွဲကြီးကြီး၊ သံယောဇဉ်ကြီးကြီးနဲ့ အံကြိတ်ပြီး Blogspot နဲ့ ဖန်တီးနေတဲ့သူတွေ မရေမတွက်နိုင်လောက် အောင်ကို ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘလော့ဂ်ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးမိတဲ့ အချိန်မှာ Blogspot နဲ့ ဘလော့ဂ် လေး တစ်ခု စတင်ဖန်တီးမိပါတယ်။ သူများတွေ ရေးနေတာကို ကြည့်ပြီး အားကျရင်းနဲ့ အဲ့ဒီ Blogspot မှာ ဘလော့ဂ်လေးတစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး ကြောင်တောင်တောင် ပို့စ်လေးတွေကို တင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ တစ်ရက်၊ နှစ်ရက် အတွင်းမှာပဲ ကျော်ခွရတဲ့ ဒုက္ခနဲ့ ကော်နက်သေ ရဲ့ ဖိစီးမှုကို မခံနိုင်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီ ဘလော့ဂ်လေးကို အဲ့ဒီ အတိုင်းပဲ ပစ်ထားလိုက်မိပါတယ်။ အခုအချိန်ထိလည်း အမှတ်တရ အဖြစ် ကျွန်တော် ထားထားပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာမှ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း မောင်သားဖြိုးနဲ့ တွေ့လို့ သူ့ကို အကူအညီ တောင်းရင်းက သူရဲ့လမ်းပြသင်ပေးမှုနဲ့ WordPress ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ WordPress နဲ့ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး ဘလော့ဂ် လေးကို ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို WordPress ကို သုံးမိတဲ့ အချိန်ကစပြီး သံယောဇဉ်ကြီးကြီးနဲ့ WordPress အပေါ် စွဲလန်းခဲ့ပါတယ်။ mmwordpress က ကိုသင်္ကြန်တို့ရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုအပါအ၀င် WordPresser သူငယ်ချင်းများစွာရဲ့ လက်တွဲခေါ်ယူမှုနဲ့အတူ WordPress ကို သုံးရင်း WordPress နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာလေးတွေကို ထပ်မံ ဆည်းပူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုဘလက် တို့ဦးစီးတဲ့ mmgenius (WordPress MU) မှာ WordPress ဘလော့ဂ် ရယူခဲ့ပြီး မသိသေးတဲ့ အရာတွေကို မေးမြန်းနာယူရင်းနဲ့ WordPress ရဲ့ အရသာ ရှိမှုကို ထပ်မံ ခံစားသိမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ ဘလော့ဂါ တော်တော်များများကို WordPress သုံးစွဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ WordPress မှာ ဘလော့ဂါလို မဟုတ်ပဲ hosting ပြသနာ ရှိပေမယ့် သုံးစွဲရတဲ့နေရာမှာ Professional ဆန်ပါတယ်။ Free hosting နဲ့ WordPress MU တွေ သုံးရင် အနည်းနဲ့ အများ ပြသနာ ရှိပေမယ့် ကိုယ်ပိုင် hosting ၀ယ်သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ WordPress ဟာ ထူးခြားတဲ့ အနှစ်သာရတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ WordPress ကို စမ်းသုံးချင်တဲ့ မိတ်တွေတွေ အတွက် MyanmarPress က WordPress MU Blog service ပေးနေသလို Myanmar WordPress ကနေလည်း WordPress Software 3.1.1 ကို မြန်မာဘာသာ အဖြစ် ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို စိတ်ဓါတ်နဲ့ မှန်းမသိ အဲဒီဆိုဒ်ကို ဘန်းထားပါတယ်။ လေ့လာလိုသူ ရယူသုံးစွဲသူတွေ အတွက် ထုံးစံအတိုင်း ကျော်ခွပြီးတော့ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး WordPresser တွေအတွက် အသုံးဝင်ပလဂ်အင် ဧရာဝဗ်ကစ်တ် ကိုလည်း ဧရာဖောင့်နဲ့ ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ မြန်မာဘာသာ WordPress 3.1.1 ကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် မြန်မာဘာသာကို မည်သည့်နေရာ မည်သည့် စက်မှမဆို ကောင်းမွန်စွာ ဖတ်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ WordPress ကို အရသာမြိန်မြိန်နဲ့ စားသုံးနိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျာ။
G- Talk ခြင်း နှင့် B- Blogging
April 4, 2011 by zoxagain
ပို့စ်တိုင်တယ်လ် ကို ဖတ်မိပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေလည်း ကျွန်တော်တို့ အရင်ရေးခဲ့ကြတဲ့ တဂ်ပို့စ်အဟောင်း ဂျီတော့ခ်ချည်း သုံးမယ့်အစား ဘလော့ဂ် တင်ပါလားကို သတိရမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီ ပို့စ်လေးကိုလည်း တဂ်ပို့စ်လေး အဖြစ်ပဲ ကျွန်တော် ထပ်မံရည်ရွယ်ချင်ပါတယ်။ ဂျီတော့ခ်မှာ စကားပြောခြင်း အတတ်ပညာ နဲ့ ဘလော့ဂ်ဖန်တီးခြင်း အတတ်ပညာ တွေရဲ့ ကွာဟမှုကိုလည်း ဖလှယ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလေး တစ်ခုလည်း ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ အတွက် ဒီပို့စ်လေးကို ရေးမိပြီး တဂ်ဖြစ်သွားတယ် ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ။ ဂျီတော့ခ် သုံးစွဲဖို့ အတွက် လိုအပ်ချက်ဘာတွေ ရှိမလဲဆိုတာ ကျွန်တော် လက်လှမ်းမှီသလောက် ပြောချင်ပါတယ်။ တစ်အချက် အနေနဲ့- ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ မလိုပါဘူး။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အင်တာနက် ဆိုင်တိုင်းလိုလိုမှာ ဂျီတော့ခ် အင်စတော လုပ်ပြီးသားရှိပါတယ်။ နှစ်အချက်အနေနဲ့ ဂျီတော့ခ်သုံးစွဲဖို့အတွက် ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတတ်ပညာ များများစားစား မလိုပါဘူး။ မောက်စ်ကိုင်တတ်ပြီး Screen က Arrow ကို ကြည့်တတ်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။ သုံးအချက်အနေနဲ့- အကောင့်ဖွင့်တတ်ဖို့လည်း မလိုပါဘူး။ ၂၀၀ ပေးရင် ဆိုင်တွေက အကောင့်ဆားဗစ် ပေးကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါပြီ။ ဂျီတော့ခ်ကိုပဲ ကမ္ဘာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက လူကြီး လူငယ် လူလတ် တွေ အားလုံး ဂျီတော့ခ်မှာ လူပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ ချက်တင်လုပ်ကြရင်း အရိုးဆွေးကြရပါတယ်။ အင်တာနက် ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာရွာကြီးဆိုတာဟာ သူတို့ အတွက် ဂျီတော့ခ်မှာပဲ အဆုံးသတ်ကြပါတယ်။ အလွန့် အလွန် ကံကောင်းတဲ့သူတွေသာ Googling နဲ့ နီးစပ်ကြရပါတယ်။ တကယ်လိုအပ်လို့ သုံးစွဲနေတဲ့ G-talker တွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ၀ါးလုံးတစ်လုံးနဲ့ ကျွန်တော် သိမ်းကျုံးရိုက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သုံးတတ်ရင် ဘယ်အရာမဆို အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်။ ကျူဖို့ ငြူဖို့ လောက်သာ G-talk ကို သုံးစွဲနေကြရင် အချိန်တွေသာ ကုန်သွားမယ်၊ ကိုယ်လည်း ဘာမှ မဖြစ်လာနိုင်သလို ကုန်သွားတဲ့ အချိန်တွေဟာလည်း အများကြီး နှမြောဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကျူဂရုပ်(ကျူနေသူများ အုပ်စု) တွေလည်း မိမိတို့ ကျူနေတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ခါလောက် သတိထားကြည့်ပါ။ ဘယ်သူကမှ မိမိတို့ကို အထင်ကြီးတဲ့ မျက်စိနဲ့ မကြည့်သလို မိမိတို့ သိက္ခာတွေလည်း ဘယ်နှပြားဖိုးလောက် ကျန်ခဲ့မယ်ဆိုတာကို တွက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ မိမိတို့ (လူကြီး၊ လူလတ်) ကိုကြည့်ပြီး နောင်တက်လာမယ့် လူငယ်တွေကိုလည်း အတုယူမှားနေကြတယ် ဆိုတာကို ကိုယ်ချင်းစာပြီး သဘောပေါက် နားလည်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ လက်ရှိကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာတောင် ကျွန်တော့် အနားမှာ ၁၅ နှစ် ၀န်းကျင် ကောင်မလေး တစ်ယောက် G-talk နဲ့ တဘက်က ယောက်ျားသား တစ်ယောက်ကို ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲနွဲ့ ပြောနေတာကို ကြားနေရပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ အားအားရှိ G-talk ချည်း ထိုင်နေကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ။ ဘယ်လိုပညာတွေ ရလာနိုင်မလဲ။ တွေးဆကြည့်ပေးကြပါ။
မြန်မာပြည်မှာ ဘလော့ဂါ မြောက်မြားစွာ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီ အထဲက ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ အကျိုးပြု ဘလော့ဂါတွေပါ။ အင်တာနက် စာမျက်နှာကနေ သူတို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ၀င်ရောက် လိုက်မယ်ဆိုရင်ပဲ ကြည့်ရှုသူအတွက် အကျိုးရှိမယ့် အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ ပေးတတ်ကြပါတယ်။ အနည်းဆုံး တစ်ခုလောက်တော့ ၀င်ရောက်သူတွေဘက်က ရသွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်သိထားတဲ့ ပညာတွေ၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကို တွန့်တိုခြင်း မရှိပဲ ရက်ရက်ရောရော ပေးတတ်ကြပါတယ်။ အချင်းအချင်း ရိုင်းပင်းကြပါတယ်။ ကျူခြင်း၊ ငြူခြင်းကနေ ရှောင်ရှားကြပါတယ်။ ဘလော့ဂ်လောကထဲ စ၀င်လာဖို့ အတွက် စာရေးဆရာ တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့မလိုသလို၊ ဘလော့ဂ်ရေးဖို့ အတွက် ဘလော့ဂ်ကနေပဲ ပြန်လည် သင်ပေးသွားပါတယ်။ အိုင်တီပညာရှင်၊ ပရိုဂရမ်မာ မဟုတ်လည်း ဘလော့ဂ်ရေးဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖွင့်ဟနိုင်ပါတယ်။ အသိပညာတွေ တိုးပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘလော့ဂ်ဘယ်လို စရေးမလဲ။ Blogger.com ကတော့ အခုလောလောဆယ်မှာ ဘန်းထားပါတယ်။ ကျော်ခွရတဲ့ ဒုက္ခတွေနဲ့ ငြိတွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နံမည်ကြီး Blog Platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ WordPress ကတော့ hosting လိုပါတယ်။ freehosting နဲ့ အသုံးပြု ဖန်တီးလိုသူတွေ အတွက် wordpress blog ပြုလုပ်နည်းကို ဒီလင့်က် မှာ သွားရောက်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ myanmarpress မှာလည်း ဖရီးဘလော့ဂ်တွေကို ၀န်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ အချိန်အနည်းငယ်လေး ပေးပြီး သွားရောက် လေ့လာကြည့်ပါ။ ဖန်တီးကြည့်ပါ။ Talking နဲ့ Blogging ရဲ့ ကွာခြားတဲ့ အရသာကို ခံစားသိရှိရပါလိမ့်မယ်။
ဒီပို့စ်လေးကို ဆက်လက်ရေးပေးဖို့ အတွက် မောင်ဥဂ္ဂါ၊ ကိုလင်းဦး၊ နတ်ဆိုးလေး၊ မိုးထက်အိမ်၊ မယမင်း၊ sosegado နဲ့ လက်လှမ်းမှီသလောက် ဘော်ဒါဘလော့ဂါတွေကို တဂ်ထားပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted in tag-post.
Bill Gate ကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်း
March 20, 2011 by zoxagain
ကျွန်တော် Facebook ထဲမှာ ကျင်လည်နေတုန်း အင်္ဂလန်က ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရဲ့ Wall ထဲကို ခြေချမိပါတယ်။ အဲဒီမှာ အမှတ်မထင် သူကိုယ်တိုင် ဖန်တီး ရှာဖွေ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ Microsoft ဖခင်ကြီး Bill Gate ရဲ့ အတွင်းရေးလေးတွေကို ဖတ်မိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နှစ်သက်မိသလို ရောင်းရင်းတို့တွေလည်း အမှတ်ထားမိစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ကျွန်တော်ပို့စ်အဖြစ် တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ရေး မဟုတ်သလို စာသားအစအဆုံးကို သူ့ဆီကပဲ ကော်ပီ၊ ပေ့စ် လုပ်ပြီး တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ စက္ကန့်တိုင်းလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀ ၀င်ငွေရှိပြီး တစ်ရက်တာကာလအတွက် ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ၀င်ငွေရှိ၍ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၇.၈ ဘီလီယံရှိသည်။
၂။ အကယ်၍ သူသည် ဒေါ်လာတစ်ထောင်ပြုတ်ကျသွားခဲ့သည်ဆိုပါလျှင် ဘယ်တော့မှ ပြန်ကောက်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အဆိုပါ ပြန်လည်ကောက်ယူမည့်အချိန် ၄ စက္ကန့် တွင်ပင် သူသည် ဒေါ်လာတစ်ထောင် ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။
၃။ အမေရိကန် ဖက်ဒရယ် အစိုးရ၏ ပြင်ပကြွေးမြီသည် ၅.၆၂ ထရီလီယံမျှရှိသည်။ အကယ်၍ ဘီလ်ဂိတ်သာ အဆိုပါအကြွေးကို ပေးဆပ်ရမည်ဆိုပါက ၁၀ နှစ်မပြည့်မီကာလတွင်ပင် အကြွေးကျေသွားပေလိမ့်မည်။
၄။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းကို ၁၅ ဒေါ်လာစီ အလှူဒါနပြုခဲ့သည်ဆိုသော် ၄င်းအိတ်ကပ်ထဲတွင် ဒေါ်လာ ၅ သန်းခန့် ကျန်ရှိနေဦးမည် ဖြစ်သည်။
၅။ အမေရိကန်အားကစားလောကတွင် အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်ဖြစ်သော မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန် ၂၂၇ နှစ်ခန့် မစားမသောက်ပဲစုမှ ရရှိမည့် ၀င်ငွေသည် ဘီလ်ဂိတ်၏ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုကို မှီနိုင်မည်။
၆။ ဘီလ်ဂိတ်တွင် တိုင်းပြည်တစ်ခုရှိသည် ဆိုပါလျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၃၇ ယောက်မြောက် အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်လိမ့်မည်။
၇။ ဘီလ်ဂိတ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို တစ်ဒေါ်လာတန်များဖြင့် စီတန်းလိုက်မည်ဆိုပါက ကမ္ဘာမှ လကမ္ဘာအထိ စီတန်းနိုင်ပြီး အသွားအပြန် ၁၄ကြိမ် စီတန်းနိုင်မည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန် နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပြီး ဘိုးအင်း ၇၄၇ လေယာဉ်ဖြင့် ဆိုပါက ၇၁၃ ခေါက်တိတိ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးရမည် ဖြစ်သည်။
၈။ အသက် ၉၀ ပျမ်းမျှနှုန်းအရ တွက်ချက်မည်ဆိုပါက ယခု ဘီလ်ဂိတ်၌ ရှိနေသော အသက်အရွယ်မှ မသေဆုံးခင်အချိန်အထိ သူ၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာများကို တစ်နေ့လျှင် ၆.၇၈ သန်း သုံးဖြုန်းပစ်မှသာ ကုန်ဆုံးနိုင်ပေမည်။
၉။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာသုံးစွဲနေကြသော Windows သမားများသည် Microsoft Windows Error တက်စဉ်တိုင်း (သို့) Hang သွားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာနှုန်းမျှသာ ဘီလ်ဂိတ်ကို တောင်းခံရမည် ဆိုပါက သူသည် ၃ ရက်အတွင်း ဒေ၀ါလီ ခံသွားရနိုင်ပေသည်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဖတ်ပြီး၊ တွေးပြီး နည်းနည်းလေးတော့ ပြုံးမိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Netvideohunter Firefox Add on
MMgenius Blog Service ပြန်လာပြီ